Mourinho Oo Markii ugu horeysay amaanay Wenger | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Mourinho Oo Markii ugu horeysay amaanay Wenger
Jose Mourinho ayaa amaanay dhigiisa Arsene Wenger isagoo ku tilmaamay tababare sarre, waxaana uu sheegay inuu filanayo inay Arsenal kula tartanto Chelsea xilli ciyaareedka danbe koobka horyaalka Premier League.
Labada tababare ayaan xiriir fiican laheyn, waxaana ay inta badan hawada isku mariyaan hadalo kulkulul xitaa waxa ay mararka qaar noqdaan kuwa gacanta iskula taga.
Si kastaba, si aan looga baranin ayuu Mourinho markaan naxariis ugu muujiyay dhigiisa Gunners, isagoo u sheegay BT Sport: “Waxaan aaminsanahay in Arsenal ay heysato tababare sarre, waa iga dhab, ciyaar igama ahan. Xitaa waa ay adkaan doontaa in la garaaco xilli ciyaareedka danbe.”
Xiriirka xun ee Mourinho kala dhaxeeya Wenger ayaa gaaray meeshii ugu xumeyd sannadkii hore markii uu ku tilmaamay Wenger nin takhasus ku ah guuldarada, taasoo keentay in macalinka reer Portugal si weyn loogu eedeeyo inuu ixtiraamdarro muujiyay.
Ka dib labada nin ayaa ku dhawaaday inay gacanta iskula tagaan kulan Premier League ahaa oo ka dhacay Stamford Bridge bishii October. Wenger ayaa kala tuuray Mourinho ka hor inta uusan soo kala dhexgelin garsooraha afaraad Jon Moss.
Wenger ayaana raaligelin ka bixiyay habdhaqankiisa iyadoo Chelsea ay ciyaartaas ku badisay 2-0.